HlaMin – Page 8 – Lifelong Learner
Update : October 15, 2021 Unesco inscribed Myanmar’s ancient capital of Bagan asaWorld Heritage Site on July 6, 2019. Saya U Moe Aung (Tekkatho Moe War) has portrayed the cultural, religious, historical and architectural heritage of Bagan. စာေရးသူရဲ႕ ႏွလံုးေသြးမွ စီးဆင္းလာတဲ့ႏွစ္သိမ့္ၾကည္ႏူးျခင္း ကဗ်ာ။ “ပုဂံအေမြ” Heritage of BAGAN ႏွလံုးေသြးရဲ႕ […]
Packages in the Bag
Update : October 15, 2021 “အိတ်ထဲက အထုပ်တွေ” သံသရာ ရေပြင်ထက်ဟိုဘက်ကမ်း ဒီဘက်ကမ်းဖြတ်သန်းဆက်ထားတံတားပေါ်က မြင်ကွင်းလေး။ ဒီဘက်ကမ်းကို ကျောပေးတဖြည်းဖြည်း လျှောက်လှမ်းနေသူ ခရီးသွား။ အိုဘယ့် … အမောင်ခရီးသည်သင်လွယ်ထားသည့်သင်၏ အိတ်မှာဘာများထည့်ထား ပြီးပြီနည်း။ အတ္တခြုံကာမဟူရာသမားလူရမ်းကား၏တရားမဲ့ “အကုသိုလ်ထုပ်” တစ်ခု သီလ သမာဓိ ပညာသိက္ခာသုံးပါးအားထုတ်ထားသည့်တရားပြည့် “ကုသိုလ်ထုပ်” တစ်ခု။ အကုသိုလ်ထုပ်သေးပြီးကုသိုလ်ထုပ် ကြီးမှသာဘဝအဆင့်တွေ တိုးတက်သံသရာက ထွက်မြောက်နိဗ္ဗာန်ကို ဆိုက်ရောက်နိုင်မှာ။ ကုသိုလ်ထုပ်သေးပြီးအကုသိုလ်ထုပ် ကြီးလျှင်ဖြင့်ဘဝအဆင့်တွေ နိမ့်ကျလာသံသရာမှာ နစ်မွန်းအပါယ်လေးဘုံမှာ ကျွမ်းပစ်ဒုက္ခတွေရစ်ပတ်အထပ်ထပ်ဆင်းရဲအရှုံးနဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်ရမှာ။ အိုဘယ့်…အမောင်ခရီးသည်သင်လွယ်ထားသည့်လွယ်အိတ်ထဲကုသိုလ်ကတစ်ပဲငရဲကတစ်ပိဿာမထည့်ပါနှင့်ဉာဏ်ချင့်ဆုံးဖြတ် လိုက်နာပါ။ English version “Packages in the bag” Above […]
Update : October 15, 2021 by Hla Min and Aung Myaing “နိယာမ” လောက ဓမ္မတာရုန်းပါမှရှင်သန်မရှင်သန်ချင်လျှင် မရုန်းနဲ့။ ယနေ့ ရုန်းကန်မနက်ဖြန် ရှင်သန်ဖို့။ ရှင်သန်ခြင်း မနက်ဖြန်ဟာရုန်းကန်သူကို ကြိုနေတယ်။ English version: “Principle” Law of NatureFight to prosperDon’t want to prosperThen, don’t fight Fight todayTo prosper tomorrow A prosperous tomorrowIs waiting for the fighter
Update : October 15, 2021 “အုံ့ပုန်း” အော်…ဟိုမှာသူ…. ချုန်းသည် ရွာ၏ ချုန်း၏ မရွာရွာသည် မချုန်း အချစ်ဆုံးရေ မချုန်းမိတာ မှားခဲ့ပြီ။ အုတ်ဖို မောင်ရင်မောင် Chemical Engg 72 “Secret Love” Well … There she is Thunder and Rain Thunder but No Rain Rain but No Thunder My Dearest Love I regret for not invoking Thunder Translation […]
Update : October 15, 2021 By Padigone Sein Win with comments by Wynn Htain Oo (M72) ခင္ေမာင္တိုးသို႔တမ္းၿခင္း အစဥ္ထာ၀ရ၊တြယ္တာႀကေပမဲ႔ သခၤါရနဲ႔တရားခ်င္႔ေတာ႔….. သြားႏွင္႔ေပါ႔.. သြားႏွင္႔သူငယ္ခ်င္း…… ၀ိပသ၁နာတရားအားထုတ္ႀကေစရန္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုလမ္းၿပေပးခဲ႔ပါေသာကိုယ္တိုင္လဲက်င္႔ႀကံအားထုတ္ပါေသာသူငယ္ခ်င္း ငါတို႔၀မ္းနဲမွဳကေပၚထြက္တဲ႔သံေ၀ဂေႀကာင္႔တမလြန္ကေက်နပ္ေနမွာပါ I provideda“translation” of the poem as comments to that posting. Though we would like to be together eternally by the laws of Sankhara […]
Update : October 15, 2021 You may haveabetter war strategy And may also have stronger weapons But ……. If you fail to touch the heart of the people and fail to respect their strength (Your weapons will be ineffective because) Your sword blades will be blunt […]